IAllocadia: Yakha, ulandelele, kwaye ulinganise iiPlani zakho zeNtengiso ngokuzithemba okukhulu nokuLawula | Martech Zone
Ukukhula kokuntsokotha kunye noxinzelelo olwandayo ukubonisa ubungqina bempembelelo zizizathu ezibini zokuba kutheni ukuthengisa kunzima kakhulu kunakuqala. Umdibaniso wamajelo afumanekayo, abathengi abanolwazi ngakumbi, ukwanda kwedatha, kunye nesidingo esithe rhoqo sokungqina igalelo kwingeniso kunye nezinye iinjongo kukhokelele kuxinzelelo olwandayo kubathengisi ukuze babe ngabacwangcisi abanolwazelelelo kunye nabaphathi abangcono bohlahlo-lwabiwo mali. Kodwa okoko nje bebambekile bezama ukugcina umkhondo wayo yonke into kwizipredishithi, ngekhe boyise le mingeni. Ngelishwa, yimeko ekuyiyo ngoku I-80% yemibutho ngokophando lwethu lwamva nje.
Ukusebenza kweNtengiso yeAllocadia yokujonga isisombululo
faka AllocadiaIsoftware-njengenkonzo yolawulo lwentengiso yolawulo lwentengiso eyilelwe ngabathengisi, yabathengisi, ebonelela ngendlela engcono yokwakha izicwangciso zentengiso, ukulawula utyalomali, kunye nokulinganisa ifuthe kwinkampani. IAllocadia ishenxisa lonke ucwangciso kunye nohlahlo-lwabiwo mali kwaye ivelise ukuqonda okwenyani kwimeko yokuchitha kunye nentengiso ye-ROI. Ngokunceda abathengisi ukuba baqhube ukuthengisa ngokufanelekileyo, iAllocadia ikwanceda abathengisi ukuba bathengise ngokufanelekileyo.
Iqonga leAllocadia lilahlela ezantsi kubuchule abathathu: Ukucwangcisa, ukuTyala imali, kunye neMilinganiselo yokulinganisa.
Masiqale ngomjikelo wakho wokucwangciswa konyaka. IAllocadia iseka ubume obumiselweyo kunye noqoqosho lwendlela oza kuhamba ngayo kunye neqela lakho ekwakheni isicwangciso sakho sentengiso. Nokuba icwangciswe ngejografi, iyunithi yeshishini, imveliso, okanye indibaniselwano yoku kungentla, ubume beAllocadia buguquguqukayo buza kubonisa indlela ofuna ukulijonga ngayo ishishini lakho. Yenza ngokulula ulawulo lwakho olunqwenelekayo, emva koko unike iithagethi zokuchitha eziphezulu ezinxulumene noko. Oku kubandakanya isiqingatha sokuqala sesicwangciso sakho, kwaye kunika isikhokelo esicacileyo kubanini bebhajethi ngendlela ekufuneka behlule ngayo utyalo-mali lwabo ukusuka ezantsi ukuya phezulu (isiqingatha sesibini), ngendlela ehambelana ngokupheleleyo notyalo-mali kunye nezinto eziphambili ngokubaluleka.
Ngawo wonke umntu osebenzisa inkqubo enye, elandela iindibano ezifanayo zokubeka amagama, kunye nokumakisha izinto ngeendlela ezifanelekileyo, ngoku uya kuba nakho ukusonga zonke izicwangciso ezantsi ezantsi zibe ngumbono opheleleyo, wokujonga umbutho. Uyakwazi ukubona ukuba nini kwaye phi zonke iinkqubo zakho zicwangciselwe ukwehla, ukuba zizakubiza malini, kwaye ziziphi iimpembelelo ezilindelekileyo kwingeniso eziza kubakho.
Ukutyala imali kunye neAllocadia
Nje ukuba ixesha elinikiweyo liqhubeke, abathengisi kufuneka bazi ukuba bemi phi kwiindleko kunye nohlahlo-lwabiwo mali olukhoyo ukuze bazi ukuba lingakanani igumbi ekufuneka belilungelelanisile. Kodwa ukuba bathembele kwiqela elinika ingxelo ukuba bafumane olu lwazi, banokuba semngciphekweni wokulinda ixesha elide okanye abayi kufumana datha abayifunayo kwifomathi elungileyo. Kungenxa yokuba ezeMali zijonga umhlaba kwiiakhawunti ze-GL, hayi iinkqubo okanye imisebenzi enje ngabathengisi.
IAllocadia isombulula le ngxaki ngokungenisa elizweni kunye nokuzenzela kwimephu yedatha ye-invoice isuka kwiZemali iye kwizinto ezifanelekileyo zohlahlo-lwabiwo mali eAllocadia ukuze abathengisi bakwazi ukubona ngoko nangoko oko bakuchithileyo, oko baceba ukukuchitha, kunye noko bakushiyileyo. Ngoku banokuwalungela amathuba njengoko bevela, ngaphandle kokukhathazeka ngokuya ngaphezulu okanye phantsi kohlahlo-lwabiwo mali. Kuba xa liphela ixesha, ukuhambisa uhlahlo-lwabiwo-mali olungasetyenziswanga kuhlala kungekho etafileni.
Iziphumo zokulinganisa ngeAllocadia
Inyathelo lokugqibela kwindlela eya kwi-ROI ihlala inzima kakhulu. Ukukwazi ukubopha imibhobho kunye nengeniso kwimisebenzi yentengiso kunye namaphulo yinto engenakwenzeka - phambi kweAllocadia. Ngokudibanisa idatha yeCRM ngokuthe ngqo kwimigca yeAllocadia, senza kube lula ukudibanisa amachaphaza phakathi kotyalo-mali lwakho kunye nefuthe abaqhuba ngalo. Ngoku unganakho ukubangumnini wencoko kwi-ROI yeNtengiso, kwaye ubonise inkampani yonke ukuba le nto uyenzayo iqhuba ngokwenyani, ifuthe elingqinisisekayo kwishishini. Ngemodeli enamandla yokunikezela kunye neenkcukacha kwi-ROI ngenjongo, uya kwaziswa ngcono ukuba uthathe isigqibo sokuba uza kuyichitha phi imali yakho yokuthengisa.
Qalisa ukuThengisa ngcono ukuze ube nakho ukuThengisa ngcono
Ukusuka kwizixhobo zemodeli yengeniso ukuya ekucwangcisweni kwemeko kunye nokumakisha okulungisekayo, iAllocadia ibandakanya uluhlu olubanzi lwezinto ezinokukunceda ukuba usebenze ukuThengisa ngqongqo ngakumbi, ngokuhambelana kunye nokuqikelela. Iyakukugcinela ixesha kunye nomzamo ekucwangciseni nasekuhleleni uhlahlo-lwabiwo mali ukuze ukwazi ukugxila kumandla ekuyileni nasekwenzeni imikhankaso yokuthengisa eqaqambileyo eqhuba iziphumo ezifanelekileyo.
Allocadia ngamanani *:
Umndilili wexesha eligcinwe kucwangciso kunye nohlahlo-lwabiwo mali: 40-70%
Inani lotyalo-mali olwenziwe ngokutsha olungasebenziyo: 5-15%
Ukuphuculwa komnatha kwiNtengiso ye-ROI: 50-150%
Ixesha lokuhlawula kutyalo mali lweAllocadia: Ngaphantsi kweenyanga ezili-9
* Njengoko kuxeliwe ngabathengi beAllocadia
Ulawulo lokuSebenza kweZona ndlela ziBalaseleyo
Ukulungiselela ukusebenza kwakho kwentengiso luhambo olukwinqanaba ezintlanu zokuvuthwa. Sishwankathele la manqanaba kwaye sichaze ngononophelo indlela yokuqhubela phambili kwinqanaba ngalinye lethu Intengiso yeModeli yokuKhula kokuSebenza. Kuyo uyakufunda ukufumanisa ukuba uphi namhlanje, kwaye kufuneka wenze ntoni ukuze uqhubele phambili kwinqanaba elilandelayo.
Nantsi indlela ekujongwa ngayo ukujonga phezulu:
Seka a IZiko lokuThengisa lokuGqwesa oku kutsala, ukuqeqesha, kunye nokugcina eyona talente intle kwishishini, kubandakanya nabantu abanedatha eqinileyo kunye namandla ohlalutyo.
Ukulungelelanisa iinzame zakho kunye ne Ukuthengisa kunye neMali, ukuya kwindawo apho ezeMali ngumcebisi othenjiweyo kwaye iNtengiso iyaqonda ukuba kwaye njani ukuThengisa kunegalelo kumgca ophezulu.
Beka ngokucacileyo, kufikeleleke, Iinjongo zeSMART kuwo onke amanqanaba ombutho wentengiso, kunye neeteknoloji 'endaweni yamampunge' ezinje ngeendwendwe zewebhu kunye ne-imeyile ivula ngeemetri ezinzima njengeendleko-zokukhokela, igalelo lombhobho kunye ne-ROI.
Susa ii-silos zedatha, emgangathweni ujikeleze uqoqosho oluzinzileyo kunye nesakhelo, kunye nokuseka umthombo omnye wenyaniso kwintengiso yenkcitho kunye nefuthe. Bopha idatha yakho ukuze ufumane isenzo esimiselweyo.
Invest in a Itekhnoloji yentengiso yentengiso osebenzisa izixhobo ezongezwe ngexabiso zamva nje, enemephu ecacileyo apho uzakuya khona nesitaki sakho njengoko ishishini lisanda. Eyona nto ibalulekileyo iya kuba yi-CRM yakho, ukuthengisa ngokuzenzekelayo, kunye nezisombululo ze-MPM.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ubamba njani kwiModeli yokuKhula kokuSebenza? Thatha uvavanyo lwethu lovavanyo kwaye uthelekise iziphumo zakho ngaphezulu kwe-300 kwabanye abathengisi kwihlabathi liphela!
Thatha uVavanyo loVavanyo lweNtengiso
IAllocadia isebenza kwiinkampani zeB2B kuluhlu lwamacandelo kubandakanya iTekhnoloji, ezeMali kunye neBhanki, ukuThengisa, iiNkonzo zeShishini, kunye noKhenketho kunye nokuBuka iindwendwe. Umthengi weprofayile efanelekileyo uneqela labathengisi abangama-25 okanye nangaphezulu kunye / okanye iqhinga lokuthengisa elinamajelo amaninzi elihlala lijikeleza ii-geographies, iimveliso, okanye iiyunithi zeshishini.
Ulawulo lweNtsebenzo yoLawulo lweNtengiso-Allocadia
Ishishini leenkonzo zezemali lihamba ngokukhawuleza kwaye likhuphisana kakhulu, ngakumbi xa usebenza kwimarike enkulu. ECharles Schwab, oku kuguqulela kuhlahlo-lwabiwo mali olukhulu kunye nolwelo olunolwabiwo lwarhoqo kunye nangaphezulu kwamaziko angama-95 eendleko. Ukwenza izinto zibe ngumceli mngeni ngakumbi, iqela laseCharles Schwab lizibambe kwinqanaba eliphezulu kakhulu lokuchitha, lijolise ekujoliseni kwe-2% ukuya kwi-0.5% yohlahlo-lwabiwo mali.
IAllocadia ilincedile eli qela likhulu labathengisi ukuba lisuke kwiipredishithi kwaye lidibanise inkcitho yabo yentengiso kwinkqubo enye, emanyeneyo, emiselweyo egcina isidingo sabo sokuba bhetyebhetye kwaye baphendule kutshintsho. Ngenkqubo elula, ekhawulezayo yohlahlo-lwabiwo mali kunye nokubonakala okungcono kutyalo-mali, abathengisi eCharles Schwab ngamagosa angcono ohlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa kunye nababalisi bamabali abangcono bempembelelo yabo kwishishini.
Khuphela i-Case Study
Amanyathelo amahlanu okuKhulisa ukuSebenza kwakho kweNtengiso
tags: eyabelweizinto ezilungileyoidashboard yentengisoukugqwesa kwezentengisoIinjongo zokuthengisaintengisoulawulo lwentengisoUmbhobho wentengisoucwangciso lwentengisoizicwangciso zentengisoItekhnoloji yentengiso yentengisoisitaki seMartechukuthengisa okulinganisiweyompmbulumko
Iifowuni zoSetyenziso lweSelfowuni kunye neeQonga leWebhu eziSelfowuni kwiShishini lakho